प्रहरीको मिलेमतोमा प्रेमिकाले प्रेमिसँग लिइन् फिरौती, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
प्रहरीको मिलेमतोमा प्रेमिकाले प्रेमिसँग लिइन् फिरौती
बाँके। नेपालगञ्ज एकलैनीका अन्सारी थरका एक युवालाई पूर्व प्रेमिकाले प्रहरीको मिलेमतोमा होटलमा बन्धक बनाएर फिरौती रकम लिएको खुलासा भएको छ ।
गएको भदौ ५ गते बिहान अन्सारीलाई पूर्व प्रेमिकाले भेट्न बोलाइन् । विवाहित युवतीलाई भेट्न सुरुमा आनाकानी गरेका अन्सारीपछि नेपालगञ्ज राँझामा रहेको निशा होटलमा पुगे ।
होटलभित्र पुगेको केही समयमै दुईजना प्रहरी होटलभित्र प्रवेश गरे । त्यतिञ्जेलसम्म अन्सारी आफूलाई फसाएकोमा अनविज्ञ नै थिए । तीनजनाको पूर्व योजना अनुसार अन्सारीलाई युवतीलाई बन्धक बनाई बलात्कार गरेको अभियोगमा फसाउने भन्दै १० लाख माग गर्छन् । तर अन्सारीले आफूसँग त्यति धेरै रकम नभएको भन्दा युवतीले नै सामाजिक बदनाम हुने भन्दै ५ लाखमा कुरा मिलाउन सकिन्छ भनिन् । अन्सारीले साथीभाइसँग मगाएर करिब चार लाख ५० हजार रुपैयाँ पुर्याए ।
त्यसपछि नपुग पचास हजार रुपैयाँ होटल सञ्चालक कृष्णकुमारी घर्तीसँग सापटी मागेर त्यहाँबाट उम्किए अन्सारी । तर होटल सञ्चालकले लामो समयसँग रकम नपाएपछि इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरमा उजुरी दिन्छिन् । अनुसन्धान अघि बढाउँदा प्रहरीले घटनामा प्रहरीकै मिलोमतो देखिएपछि संघीय प्रहरी इकाई कार्यालयमा कार्यरत प्रहरी जवान ओमप्रसाद आचार्य, दङ्गा नियन्त्रण प्रहरी गण बाँकेमा कार्यरत प्रहरी जवान जगदीश बोहरा र बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका–४ की श्रोती हमाललाई पक्राउ गरेको छ ।
इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरका इन्चार्ज प्रहरी नायव उपरीक्षक रमेश सिंहले घटनाबारे अनुसन्धान भैरहेको जानकारी दिए । पीडित भनिएका व्यक्ति आफुहरुको सम्पर्कमा नआएका कारण अनुसन्धान पूरा नभएको उनको भनाई छ । प्रहरीले पक्राउ परेकालाई जिल्ला अदालतबाट ६ दिनको म्याद थपेको जनाएको